PRADIP BHATTARAI (@pradipvattarai) on Twitter
दियो हुँ,वल्ने गर्छु दुस्मनी त मेरो अध्यारो संग मात्रै छ! थाहा छैन! तर हावा किन मेरो प्रतिरोधमा उत्रीरहन्छ!!!( मेरो व्यक्तिगत विचार ट्विटबाट व्यक्त हुन्छ्न )
PRADIP BHATTARAI retweeted
ईश्वर तिमिले सन्सार बनायौ सन्सारमा राम्रो नेपाल बनायौ केपि ओलि जस्तो नेता दिनलाइ चै किन तिम्ले यतिबेर लगायौ।
ट्विटर हेर्दा सबै दाइ सज्जन रहेछ्न । त्यो १८ जना बेइमान दाजु चाहिँ को परेछ्न?
पहेलो पात उडाउला हावाले छेक्केर बस
Replying to @SanuBhatta_ @cmprachanda @kandeldai
गलत हो। यस्ता कुरा फैलाउनु नै अनुचित हो।
पत्रकारहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चार माध्यामलाई कारबाही हुन्छ : सञ्चारमन्त्री बास्कोटा laltinkhabar.com/news/28#.XSxaB…
सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी अस्वीकार्यः सञ्चारमन्त्री ratopati.com/story/93977/20…
सञ्चार माध्यममा विदेशी लगानी अस्वीकार्य : मन्त्री बाँस्कोटा setopati.com/politics/185865
Replying to @Jitpur @NaraNepal
चोरको चौकिमा फोटो हुन्छ के त्यसले चोर्न छोडछ र?
पर्दैन। खराव मान्छे भन्दा राम्रा मान्छेका नाम लिदा राम्रो हो। रछ्यानलाई किन भाउ दिने।
Replying to @NaraNepal @Jitpur
बिराउने ले जानाजान बिराएको हुन्छ। तर नबिराउनेलाई बिराएकै थाहा नहुन सक्छ। यो भन्दा अगाडि कुनै अनलाइनमा एउटा लेख पढेको थिए।। त्यसपछी झन डरलाग्यो। दिज्जु भन्यो टन्टै साफ।
किन लाग्नु नि दाजु 😄
त्यही भएर दिज्जु भन्नुपर्छ। भाइको त कसैलाई डर लाग्दैन नि।
यो १२ वर्षे पत्रकारिता यात्रामा मलाई जानाजान विक्षिप्त बनाउने पत्रकार ‘दाइ’हरूको संख्या १८ पुगेछ। मैले १८ औं पत्रकारलाई मात्रै मुखभरिको जवाफ दिन सकेँ। अब आइन्दा त्यसो नगर्न चेतावनी दिएँ र कोठाबाट बाहिरिएँ। @subedibinu को भोगाइ setopati.com/blog/185839
मेरो किताब #शिलान्यास लाई #फिक्सनडिजाइनर कुमार नगरकोटीले रुचाउनुभएछ । नयाँ पत्रिकासँगको उहाँको किताब वार्ताको अंश- "नगरकोटीले पछिल्लोपटक पढेको नेपाली किताब सुजित मैनालीको ‘शिलान्यास’ हो । ऐतिहासिक आधारको त्यो किताब खुब मन परेको बताउँछन् ।" nayapatrikadaily.com/news-details/1…
. @narayanwagle दृष्टिकोण स्तम्भलाई गाली भनेर लेख्दा राम्रो होलानी? मैले केही समयदेखि यो स्तम्भमा गाली बाहेक भेटेको छैन। दृष्टिकोणको अर्थ सहित राखेको छु। सुत्ने बेलामा १ मिनेट यो सम्झनुस। भोलिदेखी नै यसलाइ गाली स्तम्भ लेख्नुहुन्छ। @kantipurdaily @KailashSirohiya pic.twitter.com/saVTLL5Eji
के 'पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता' कानुन भन्दा माथी छ ? Is there is any thing called 'Absolute press freedom ?' मिडिया काउन्सिल बिधेयकमा अगाडीको बाटो के ? #उत्तेजना मात्र होइन, चेतना पनि #राप मात्र होइन , प्रकाश पनि #दिशानिर्देश #Coming soon #AP1 HD # Youtube.com/DishanirdeshTV pic.twitter.com/8ZUVHvMAzT
Replying to @YubarajGhimire3
१ शब्द पाएमा पुरै किताब लेख्न सक्ने क्षमता छ। यो क्षमता रास्ट्रको लागि प्रयोग होस।
पहिला सन्तुलन विचार दिन्थ्थो नागरिकले । आजकाल एकपक्षीय भएको छ। @gunaraj कामको प्रतिपक्ष होइन, नकामको प्रतिपक्ष हुनुपर्ने होला पत्रकारिता होइन र? pic.twitter.com/fbZc0Enh7t
राम्रो गर्न बोल्न र सोच्न त सकेनन सकेनन, तर राम्रो लाई सम्म राम्रो भन्न पनि नसक्ने भए केही जथ्थाले, कान्तिपुरका चेला नै छन भ्रम छर्न त twitter.com/pradipvattarai…
Replying to @NiruThapa9
म पनि गएको थिए। धमाधम काम भैरहेको थियो। म ०५५ सालमा जादा र अहिले जादा अचमै सग विकास भएछ।